छोरा नहुँदैमा के भयो र ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
छोरै किन चाहियो ? छोरी भए हुँदैन ? अझै धेरैले भन्छन्, ‘मर्दा कसले दागबत्ती दिन्छ ? कसले किरिया गर्छ ?’ समय बदलियो। नयाँ पुस्ता बरु पुरानै सोचमा हुँदा मधेसका ज्येष्ठ महिला त्यो धारणा बदल्न कस्सिएका छन्। र, छोरीले अन्त्येष्टि गर्ने क्रम बढेको छ।
आउनुहोस्, ८० वर्षीया शीतलीदेवी साहको यस्तो ‘विद्रोह’ को सम्मान गरौं। जनकपुरधाम–७ जानकी नगरकी शीतलीदेवीका पति सय वर्षीय मुखिया साहको अघिल्लो शनिबार निधन भयो। तीन छोरीकी आमा शीतलीका आफन्त र समाज मुखामुख गर्न थाले, ‘मुखाग्नि कसले दिने ?’
वृद्धा शीतलीदेवी हातमा गुइँठा (जुन दागबत्ती दिन प्रयोग गरिन्छ) र उतरी (दाहसंस्कारपछि लगाउने लुगा) लिई अगाडि–अगाडि थिइन्। पछाडि उनका सय वर्षीय पतिको शव बोकेर तीन छोरी र एक नाति मसानघाट हिँडेको दृश्यले टोलवासी स्तब्धभन्दा बढ्ता चकित भए। र, मलामी जान तयार भएका धेरै घरभित्रैै छिरेर ढोका लगाए।
जनकपुरका मुखिया साहको पार्थिव शरीर अन्तिम संस्कारका लागि घाटतर्फ लैजाँदै पत्नी ८० वर्षीया शीतलीदेवी र छोरीहरू ।
‘उहाँ एक वर्षदेखि बिरामी हुँदा कोही हेर्न÷भेट्न आएनन्,’ पतिको किरिया बसेकी शीतलीले भनिन्, ‘छोरीहरू यही कोखबाट जन्मिएका हुन्। छोरा नहुँदैमा के भयो र ? उनीहरूले किरिया गर्न किन नहुने ?’
त्यसो त मुखिया साहलाई पनि जीवनको अन्तिम घडीमा चिन्ता त्यही थियो– मलाई कसले दागबत्ती देला ? ‘बुवा अन्तिम अवस्थामा हुँदा मलाई कसले आगो दिने भनेर सधैं बिलौना गर्नुहुन्थ्यो,’ कान्छी छोरी बुधोले आँसु पुछ्दै सुनाइन्, ‘हामी भन्थ्यौं– चिन्ता नगर्नुस्, हामी गर्छौं सबै। र, बुवाको अन्त्येष्टि गर्न पाउँदा आत्मसन्तुष्टि भइरहेको छ।’
दाहसंस्कार नै पत्नी र छोरीहरूबाट हुन थाल्नु ठूलो परिवर्तनको उदाहरण रहेको जनकपुरधाम–७ का वडाध्यक्ष जानकीराम साह बताउँछन्। ‘उनीहरू निकै गरिब परिवारका हुन्।
छोरीहरूले पढेलेखेका छैनन्, न त आमा नै। तर, चेतनाको स्तर निकै ठूलो रहेको यो घटनाले प्रमाणित गर्छ,’ शीतलीदेवीको उदाहरण दिँदै वडाध्यक्ष साहले भने, ‘छोराले अन्तिम संस्कार गरेनन् भने मुक्ति नहुने जस्ता विडम्बना पालेर बसेको हाम्रो समाजमा महिलाको यस्तो कदमले विभेद अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।’